မိမိအသုံးပြုနေသောဝန်ဆောင်မှုသည် မိမိလက်ခံနိုင်မှုနဲ့လိုက်နာမှုဖြစ်သည့်အတွက် အောက်ပါစည်းကမ်းနှင့်သတ်မှတ်ချက်များကိုဂရုစိုက်စွာဖတ်ပါ။
မိမိသည် ရွှေသတင်းဝန်ဆောင်မှုတွင်ပါဝင်သည့်အသုံးအနှုန်းများကို သဘောတူလိုက်နာပါသည်။ဝန်ဆောင်မှုသည်ပို့စ်များနှင့်ဆက်သွယ်ခြင်းများထောက်ပံ့ပေးသောဝန်ဆောင်မှုများမှ ဝင်ရောက်လာခြင်းဖြစ်ပါသည်။MoMagic Technologies Company မှဝန်ဆောင်မှုကို စီမံထားပါသည်။ဝန်ဆောင်မှုတွင်ပါဝင်ခြင်းဖြင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း၊မူဝါဒများနှင့်ပက်သက်သော အသုံးအနှုန်းများကို နားလည်သဘောပေါက်ပြီး သဘောတူလက်ခံရပါသည်။ မိမိသည် သို့အချိန်မရွေးဝင်ရောက်ပြီး အခြားဝန်ဆောင်မှုများကဲ့သို့ အကြောင်းအရာများ၊အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုများနှင့်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲခြင်းများကိုလုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။ဝန်ဆောင်မှုကိုသဘောတူလက်ခံလျှင်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကိုပါ သဘောတူရပါသည်။ Company သည်မည်သည့်အချိန်တွင်မဆို စည်းကမ်းချက်များကိုပြုပြင်နိုင်ခွင့်ရှိသည်။ဤဖြစ်စဥ်တွင် မိမိကဝန်ဆောင်မှုကိုဆက်လက်အသုံးပြုရန်အတွက် ပြောင်းလဲမှုများကိုလက်ခံရန်မေးနိုင်သည်။ထိုအချိန်တွင် စည်းကမ်းချက်များ သို့မဟုတ် updated version များလက်ခံထားခြင်းမရှိပါက မိမိသည်ဝန်ဆောင်မှုကိုဝင်ရောင်ခွင့်နှင့်အသုံးပြုနိုင်မှုကို ရှောင်ကြဉ်ရမည်။ အနည်းဆုံးအသက်၁၈နှစ်ပြည့်ရမည်ဖြစ်ပြီးအသက်၁၃နှစ်နှင့်၁၈နှစ်ကြားဖြစ်လျှင်ဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုရန်အတွက် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကိုသဘောတူရန် ဥပဒေရေးရာအပိုင်းမှ သုံးသပ်ပါမည်။
ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း Company မှဝန်ဆောင်မှုကို အပြည့်အဝလည်ပတ်စေပါသည်။ဝန်ဆောင်မှုနှင့်အတူ MPT ၏ပါဝင်မှုနယ်ပယ်မှာ billing နှင့်ငွေစာရင်းပေးသွင်းခြင်းကိုသာကန့်သတ်ထားပါသည်။အောက်တွင်ထပ်မံရှင်းပြထားပါသည်။ စည်းကမ်းချက်များတွင် အမှန်တရားအားလုံးကိုခွင့်ပြုပေးခြင်းမပြုဘဲ လိုင်စင်ရှိသူများ ၊ပေးသွင်းသူများကိုသာထိန်းသိမ်းထားပေးပါသည်။ဝန်ဆောင်မှုတွင်စည်းကမ်းချက်များနဲ့ဥပဒေကခွင့်ပြုထားသောကြောင့် အခြားအသုံးပြုခြင်းတွင်မူ တင်းကြပ်စွာ တားမြစ်ထားပါသည်။ MPT သည် အမြဲတမ်း သို့မဟုတ် ယာယီရပ်ဆိုင်းခြင်းခံရလိမ့်မည် သို့မဟုတ်ပါက အသိပေးစာနှင့်တာဝန်ယူမှုတစ်စုံတစ်ရာအကြောင်းမရှိဘဲ MPT ၏ဆုံးဖြတ်ခွင့်အာဏာကို ခွင့်ပြုရန်ငြင်းဆန်လိမ့်မည်။ဤဖြစ်စဥ်တွင်မိမိသည် ဖြည့်ဆည်းရန် လိုအပ်သော အကြောင်းအရာများကို စည်းကမ်းချက်များကြားတွင်ချုပ်နှောင်ခြင်းခံရပါမည်။ ဝန်ဆောင်မှုတွင်မိမိပါဝင်ခြင်းသည် အစီအစဉ်တကျနှင့်ကြားဖြတ်ဝန်ဆောင်မှုများဖြင့် အနှောင့်အယှက်များနေလိမ့်မည်။ကွန်ပျူတာ ချို့ယွင်းနေသောအချိန်တွင် ဝန်ဆောင်မှုပြတ်တောက်ခြင်းအတွက် မည့်သည့်တတိပါတီမဆို MPTမှ ဥပဒေအရတာဝန်ရှိသည်ကို သဘောတူလက်ခံရပါသည်။ MPT သည် ဝန်ဆောင်မှုနှင့်ပက်သက်၍ မိမိ၏အသုံးပြုမှု သို့မဟုတ် မှားယွင်းစွာအသုံးပြုမှုအတွက် မည်သို့မျှမစွမ်းဆောင်နိုင်ပါ။
a. ရွှေသတင်း http://goldenvas.com/ကိုဖွင့်ပါ။
b. ရွှေသတင်း ဝဘ်ဆိုဒ်သို့ရောက်ရှိပါလိမ့်မည်။
c. မည်သည့်ဗီဒီယိုကိုမဆို နှိပ်လိုက်သောအခါ အပတ်စဉ် ငွေပေးချေရန်အစီအစဥ်ရှိသည့်စာမျက်နှာသို့ရောက်ရှိပါမည်။
d. ထိုစာမျက်နှာတွင် 'အတည်ပြုသည်'ကိုနှိပ်ပါ။
e. အတည်ပြုပြီးနောက် ငွေစာရင်းပေးသွင်းမှုပမာဏအတွက်ပေးဆောင်ရပါမည်။
f. ထိုအခါအစီအစဥ်အတွက် ငွေစာရင်းပေးသွင်းပြီးဖြစ်ပါသည်။
အသုံးပြုသူသည်ငွေစာရင်းတစ်ခါပေးသွင်းထားလျှင် ထိုအစီအစဥ်အတွက်မြန်မာငွေ၃၀၀ကျပ် ကျပါသည်။၇ရက်တိုင်အောင် ဗီဒီယိုများကိုကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
a. ရွှေသတင်း ကိုဖွင့်ပါ။
b. 'MENU'ပေါ်တွင် အိုင်ကွန်အမျိုးအစားရွေးချယ်ပါ။
c. ငွေစာရင်းပယ်ဖျက်မှု ကိုနှိပ်ပါ။
d. ထိုအခါငွေစာရင်းပယ်ဖျက်ပြီး ဖြစ်ပါသည်။
Company သို့မဟုတ် မည်သည့်တတိယပါတီမှလွဲ၍ လိုင်စင်ရှိသူများ၊ငွေပေးသွင်းသူများ၊အခွင့်အရေးလက်ဝယ်ရှိသူများအပါအဝင် ကန့်သတ်ခြင်း၊ဆော့ဝဲလ်၊ပုံရိပ်များ၊စာသား၊graphics၊logos၊ကုန်များ၏အမှတ်တံဆိပ်၊ဝန်ဆောင်မှုတံဆိပ်၊စာမူပိုင်ခွင့်များ၊ဓာတ်ပုံများ၊အသံများ၊ဗီဒီယိုများ၊တေးဂီတ၊ယှဥ်ပြိုင်မှုနှင့်အခြားစီးပွားဖြစ်အခွင့်အရေးများသည် MPT ၏ သီးသန့်မူပိုင်ခွင့်များဖြစ်ပါသည်။အတိအကျထောက်ခံပေးခြင်းမှလွဲ၍ စည်းကမ်းချက်များထဲတွင် လိုင်စင်၊မူပိုင်ခွင့် သို့မဟုတ် စီးပွားဖြစ်အခွင့်အရေးများကို ဖန်တီးရန်ယူဆရပါသည်။မိမိသည် ဝန်ဆောင်မှုတွင်သုံးခွင့်ရသောမာတိကာများမှ ဆင့်ပွင့်အလုပ်များဖြစ်သည့် လိုင်စင်၊ငှားရမ်းခြင်း၊ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း၊ဖြန့်ဝေခြင်း၊ကူးယူခြင်း၊ပြန်လည်ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ကူးပြောင်းခြင်း၊ခင်းကျင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊ငွေပေးသွင်းခြင်း၊လိုက်ဖက်အောင်ပြင်ဆင်ခြင်း၊တည်းဖြတ်ဖန်တီးခြင်းမပြုရန်သဘောတူလက်ခံရပါသည်။မည်သည့်ရည်ရွယ်ချက်အတွက်မဆိုအသုံးပြုသောမာတိကာများကို စည်းကမ်းချက်များတွင် တင်းကြပ်စွာ ကန့်သတ်ထားပါသည်။
ဝန်ဆောင်မှုသည် အနည်းဆုံးအသက်(၁၈)နှစ်ပြည့်ရမည်ဖြစ်ပြီး MPT ဆင်းကဒ် အသုံးပြုပြီး မှတ်ပုံတင်ထားသူများအတွက်သာရည်ရွယ်ထားပါသည်။MPT Service တွင်ရှိသောအသုံးပြုသူများသည် ဝန်ဆောင်မှုကိုမရယူနိုင်ပါ။
Company သည် MPT Harmless ဖြစ်စေရန်် လက်အောက်ခံcompanyများ ၊ကိုယ်စားလှယ်များ၊မန်နေဂျာများ၊အလုပ်သမားများ၊ကန်ထရိုက်များ၊ရုံးဝန်ထမ်းများနှင့်ဒါရိုက်တာများအတွက် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများ၊တာဝန်ယူမှုများ၊ကုန်ကျစရိတ်များများကိုကာကွယ်ပေးရန်သဘောတူလက်ခံရပါသည်။ထို့အပြင်(၁)မည်သည့်dataနဲ့မဆိုဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုရန်၊(၂)စည်းကမ်းချက်များ၏အသုံးအနှုန်းများ၊(၃)ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကန့်သတ်ထားခြင်းမရှိဘဲ တတိယပါတီဖွဲ့ခြင်း၊(၄)အခြားနိုင်ငံများ သို့မဟုတ် မြန်မာနိုင်ငံ၏ဥပဒေနှင့်သဘောထားများ ထားရှိခြင်း၊(၅)ဝန်ဆောင်မှုမှ ရရှိထားသောအချက်အလက်များ၏ ပျက်စီးမှုရလဒ်များကို တောင်းဆိုခြင်း၊(၆)မှတ်ပုံတင်ထားခြင်းရှိ၍သော်လည်းကောင်း မရှိသောဖုန်းနံပါတ်ကိုအသုံးပြု၍ဝန်ဆောင်မှုကိုရရှိစေခြင်း စသည်တို့ကိုလည်းလက်ခံရပါသည်။
ပါဝင်သူများသည် MPTမှတရားဝင်ခွင့်ပြုထားသော ကိုယ်ပိုင် Data ကိုသုံးပြီး တတိယပါတီနှင့်ပက်သက်သောရည်ရွယ်ချက်အတွက်ရုပ်ပုံသို့မဟုတ် ဗီဒီယိုများနှင့်အတူ ဝန်ဆောင်မှုကို စျေးကွက်တွင်ကြော်ငြာခြင်း၊ပရိုမိုးရှင်းပေးခြင်းပြုလုပ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
ပဝန်ဆောင်မှုများ၊သတင်းအချက်အလက်များ၊မာတိကာများနှင့်ထုတ်ကုန်များ(ဆော့ဝဲလ်အပါအဝင်)နှင့်အခြားဝန်ဆောင်မှုများသည်companyတွင်အခြေခံအားဖြင့်ရရှိနိုင်ပါသည်။ထိုနည်းတူစွာ တိကျမှန်ကန်မှုရှိစေရန်အတွက်MPTမှအာမခံတာဝန်ယူမှုမပြုလုပ်ပေးပါ။ဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုရန်စွန့်စားမှုတစ်ခုပြုလုပ်သကဲ့သို့လက်ခံထားရပါမည်။ ဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုရန် မည်သည့်သတင်းအချက်အလက်၊ဆော့ဝဲလ်အပါအဝင် အခြားဝန်ဆောင်မှုများကို MPTမှတာဝန်ယူဖြေရှင်းပေးမည်မဟုတ်ပါ။သို့သော် အသေးအဖွဲ့ပြဿနာများ ၊ပျက်စီးမှုများကို ကန့်ထားထားခြင်းမရှိသေးပါ။ သက်ဆိုင်သောဥပဒေမှချမှတ်ထားသောပမာဏကိုဖြည့်ဆည်းရန် MPTမှအာမခံနှင့်တာဝန်ယူမှုများကို ငြင်းပယ်ပါလိမ့်မည်။သို့သော်သင့်တော်သောရည်ရွယ်ချက်အတွက်သာလျှင်အကန့်အသတ်မရှိ ပြုလုပ်ပေးပါမည်။ MPTသည် ဆော့ဝဲလ်အပါအဝင်မည်သည့်သတင်းအချက်အလက်အကြောင်းအရာများကို အာမခံပေးမည်မဟုတ်ပါ။Harmful ဖြစ်စေသောအရာများ၊virusesဖြစ်ခြင်းများစသည်တို့ကိုသာဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။
ပဝန်ဆောင်မှုသည် တတိယပါတီမှထောက်ပံ့ထားသောအရာဖြစ်သည်။ထိုကဲ့သို့ MPTသည်တတိယပါတီမာတိကာ သို့မဟုတ် ယင်းနဲ့ဆိုင်သည့်မည်သည့်ဝဘ်ဆိုဒ်ကိုမဆို တာဝန်ယူဖြေရှင်းမပေးပါ။MPT၏ထောက်ခံချက်ဖြင့် တတိယပါတီကိုတည်ထောင်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
MPT၏အထွေထွေစည်းကမ်းနှင့်သတ်မှတ်ချက်များကိုhttp://mpt.com.mm/m/about-home/terms-conditions-mm/တွင််ရှာဖွေနိုင်ပါသည်။စည်းကမ်းချက်များကြားတွင်ကွဲပြားမှုများရှိသော်လည်း သဘောတူရန်တိုက်တွန်းပါသည်။မြန်မာနိုင်ငံ၏ဥပဒေနှင့်စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများသည် တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိသည့်တရားရုံးမှချမှတ်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ စည်းမျဉ်းများသည် တရားဝင်ခြင်းမရှိပါက ဥပဒေမှပြဌာန်းထားသောအရာများကိုအကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိစေဘဲ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၏အထောက်အပံ့များသည်လာ်း ဥပဒေအားဖြင့်အတည်ပြုနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
ပစည်းကမ်းများအောက်တွင်အခွင့်အလမ်းများအတည်ပြုခြင်းမရှိပါက သက်ညှာခွင့်ပေးခြင်းမပြုပာ။လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း စသည်တို့ကိုပြုလုပ်မှသာ သက်ညှာခွင့်ပြုသည်။